Diyaarinta iyo isku-darka risotto - tani waa sida dakhligaagu uu ku guulaysto
Diyaarso kobcinta khadka tooska ah | Cunto karinta
Maxaa la isku dari karaa diyaarinta risotto?
Khiyaaliintu waxay ka fogaanayaan marka la diyaarinayo risotto
Dad badan ayaa jecel inay tijaabiyaan suxuun cusub marar badan si ay u keenaan noocyo kala duwan oo cunnooyinka maalinlaha ah. Cuntada aadka loo jecel yahay ee jikada gaarka ah iyo sidoo kale makhaayado waa Risotto. Cuntada bariiska ayaa badanaa caan u ah, sababtoo ah waad kala duwanaan kartaa waxayna ku darsantaa dhammaan walxahaas.
Waa maxay wax kasta oo la kiciyo?
Risotto wuxuu ka yimid waqooyiga Talyaaniga iyo saxan bariis ah. Roototto wanaagsan waa mid aad u caan ah, laakiin joogitaanka bariis wali waa "al dente".
Cunto dhaqameed dhaqameed leh boqoshaada, caleemo cusub iyo Parmesan
Diyaargarowga aasaasiga ah waa mid sahlan: Halkan, bariiska aan la qallajin ayaa si fudud u cufanaya basasha iyo subag yar ama saliideed ah oo la kariyo maraqana ilaa inta saxanka uu kakoobayo.
Dabcan, daryeel waa in sidoo kale loo qaadaa si loo arko bariiska loo isticmaalo. Dhammaan noocyada bariiska waxay ku habboon yihiin diyaarinta bariiska kaheli. Bariiska badarka dhexdhexaadka ah ayaa badanaa loo isticmaalaa, maadaama uu sii deynayo istaarijin ku filan, kaas oo ka masuul ah ka samaynta miraayadda.
Dareemista bariiska, dhinaca kale, ma aha mid ku habboon, dhammaantiisna waxay si fudud u qabadsiin kartaa si dhakhso ah, ugudambeyntuna ma ahan mid xoogan oo ku filan saxan. Risotto waxaa loo adeegsan karaa koorso muhiim ah ama sida loo raacayo suxuunta hilibka badan.
Risotto waxaa loo diyaarin karaa siyaabo badan oo kala duwan. Maaddooyinka aasaasiga ah ee suunka bariisku waa dabcan sidoo kale bariiska bariiska, basasha, dufanka iyo kuwa doonaya in ay qaataan wax yar oo khamri ah marka lagu daro biyaha. Inta soo hartay waa dabcan arin dhadhan, sababtoo ah waxaad ku siin kartaa inta kudhaca maaddooyinka khatarta ah.
Campfire iyo cuno cunto kariska
Gaar ahaan waa caan waa Rizotto Parmesan. Ujeedadaas awgeed, saxanka ayaa loo diyaariyey sida kor ku xusan. Sida ugu dhakhsaha badan bariiska waa la kariyey, wax walbana waa isbedel, ku dar subagga iyo Parmesan bariiska. Waxaad horeyba u xakamaysay risaaqa Parmesan delicious.
Xitaa risotto mushahar ayaa inta badan loo doortaa sida koorsada ugu weyn ama saxanka dhinaca. Halkan waxaad sidoo kale diyaarineysaa wax kasta oo qorshe ah oo dhidid ah boqoshaada leh basasha digsi dheeraad ah. Kadibna waxaad siisaa wax kasta oo hoos yimaada. Parmesan iyo boqoshaada ayaa sidoo kale lagu dari karaa, taas oo dabcan ku xiran tahay dhadhankaaga.
Mid ka mid ah khaladaadka bilawga ugu weyn ee diyaarinta ah waa in bariiska la kariyo muddo dheer. Tani waxay si fudud u dhigi kartaa tiro aad u jilicsan. Si kastaba ha ahaatee, bariisku waa inay ahaataa "al dente" sidaa daraadeed waxay u egtahay midabkeed buuxa iyo dhadhanka maaddooyinka kale.
Bariisga bariiska waa in aan sidoo kale la dhaqin ka hor, haddii kale waxay lumin doontaa awoodeeda iyo saxanka oo dhan ma shaqeyn doono. Intaa waxaa dheer, waa in aanad waligaa ka fogeyn shooladda muddo dheer, sababtoo ah bariiska wuxuu u gubi karaa si deg-deg ah, waana inaad isku qaseysaa inta udhaxeysa.
Sidee si dhadhan ah u dhadhamisaa?
Daryeelka Ilmaha - Si Fiican Isku Qalma
Si sax ah u barto - kordhi dhiirigelinta
Barashada si habboon - sababtoo ah barashada waa madadaalo
Si sax ah ula soco Mind Mapping
Waxbarasho kasta oo da 'kasta
Si fiican u barashada - ka dibna qof walba wax walba wuu baran karaa
Dhirta balcoon dhirta si habboon | Beerta beerta
Saliidda qumbaha inta aad cunto karisid